Nchịkọta Mgbasa Ozi Mba | Top ebe ntụrụndụ maka ememe ncheta
Ememme ezumike mba abughi ihe ndi mmadu ga-echichi ma o bu iche echiche; Otú ọ dị ka a ga-amalite. Oge ezumike na mba ọzọ nwere ike ịbụ nchekwa ebighi ebi. Ịchọgharị ebe dịpụrụ adịpụ, isoro ndị nkịtị nọ na obodo dị iche iche na-emekọrịta ihe, ịmalite ịmụ banyere ihe nketa ha, ịga ọrụ ebube dị iche iche nke mmadụ na-eme, na-eri nri nri mpaghara, bụ ihe dị ịtụnanya. E nwere ihe ọ bụla na-echere ka a nyochaa ya. Ọ bụrụ na ị nọ na-eche echiche ịga mba ọzọ iji mụta na ịchọpụta obodo dị iche iche na nhazi ọdịdị, echerela. Na-enye onwe gị nku iji gaa na ala gị. Na-enye onwe gị ihe mgbapụta site na ndụ ọjọọ, chọpụta ọmarịcha mma site na njem nlegharị anya mba ụwa.Sand Pebbles na-enye ụdị nhazi nke mba dị iche iche na nke a haziri ahazi nke ga-edozi gị. Ọ bụghị naanị inyefe, a na-enyekwa gị ebe obibi dị jụụ nakwa dị ka ụzọ nlegharị anya na-eduzi ka i wee nwee ike ịnụ ụtọ ezumike gị n'ụzọ zuru ezu.
Iji mee ka ị malite nrọ maka oge ezumike ọzọ gị ọzọ, anyị nwere ọtụtụ nhọrọ nchịkọta nke International Holiday to choose from. Kwe ka anyị na-ejere gị ozi wee nye gị ezumike kachasị elu na ndị enyi gị na ezinụlọ gị.